“ ကျောက်ဖြူမြို့တစ်ဖက်ကမ်းက ပင်လယ်ပြင်ကိုထိုးထွက်နေတဲ့ ငှက်ခေါင်းကျွန်း” – YANGON STYLE
ကျွန်းအစ ဟိုနောက်မှာ အရှည်ကြီးပဲတွေ့လား
သဒ္ဓါရခိုင်မှာရောက်နေတုန်း ကျွန်းတော်တော်များများကိ Explore လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ခုလည်း ကျောက်ဖြူနဲ့ နီးနီးနားနားက ကျွန်းတစ်ကျွန်းကို Explore ထပ်လုပ်ထားတာလေးပေါ့။ ကျွန်းနာမည်က ငှက်ခေါင်းတဲ့ ! ဘာလို့ငှက်ခေါင်းကျွန်းလို့ခေါ်လဲဆိုရင် တစ်ချို့က ကျွန်းရဲ့အစကကျောက်ဆောင်ကြီးက ငှက်ခေါင်းနဲ့ပုံစံတူလိုတဲ့။ တစ်ချို့ကျတော့လည်း အရင်ကအဲ့မှာအခေါင်းပေါက် (ဂူပေါက်) ရှိလို့တဲ့။ တိတိကျကျတော့ မသိခဲ့ရဘူး​။ စစ်တွေ ပေါက်တောဘက်မှာလည်း ငှက်ခေါင်းတောင်ဆိုတာသပ်သပ်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့ ပိုလှတာပေါ့နော်။ ဒါကသပ်သပ်စီ အလှတစ်မျိူး။ အမှတ်မှားမှာစိုးလို့
လခြမ်းကွေ့ကြီး ရေကျမှ ပိုလှတာ
ဒီကျွန်းက ကျောက်ဖြူမြို့ရဲ့ တစ်ဖက်ကမ်း တန်းခါးရိုးလို့ခေါ်တဲ့ ကျွန်းအရှည်ကြီးရဲ့အစခေါင်းပိုင်းပေါ့နော်။ တန်းခါးရိုးကျွန်းရဲ့အဆုံးမှာ နှာခေါင်းပေါက်ဆိုတဲ့ ကျွန်းရှိသေးတယ်။ နှာခေါင်းပေါက်ပုံစံနဲ့တူလို့တဲ့​။ တန်းခါးရိုးကျွန်းဆိုတာ တော်တော်ရှည်တဲ့ကျွန်းရှည်ကြီးပေါ့​။ အလယ်မှာ ရွာလည်းရှိတယ်။ ဘေးမှာလည်း ကျွန်းရွာကြီးတွေရှိတယ်။ သဒ္ဓါတို့ရွာလည်း အပါအဝင်ပေါ့။ ပြောရရင် ဒီကျွန်းရှည်ကြီးက သဘာဝဘေးအန္တာရယ်ကို ကာကွယ်ပေးထားတဲ့ ကျွန်းလို့တောင်ပြောရမယ်။ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကြီးကို ဒီကျွန်းက ကာပေးထားလို့ သဘာဝဘေးအန္တာရယ်ကျရောက်ရင် တခြားနေရာတွေထက် သက်သာတာပေါ့​။ ကဲ တန်းခါးရိုးကျွန်းရှည်ကြီးအကြောင်း နောက်မှထပ်ဆက်ကြမယ်။ ခုတော့ ခေါင်းပိုင်းဖြစ်တဲ့ ငှက်ခေါင်းကျွန်းပေါ့။ ဘာလို့လဲတော့မသိဘူး သေချာတာတော့ ကျောက်ဖြူကလူတော်တော်များများ ဒီကျွန်းကိုမရောက်ဖူးကြဘူး။ မသိတာလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ ကျောက်ဖြူမှာနေရတဲ့သူတွေ အရမ်းကံကောင်းတာနော် ဒီလိုသွားစရာကျွန်းတွေအများကြီးရှိနေတာ။ ဒီကျွန်းက ကျောက်ဖြူကလှမ်းကြည့်ရင်တောင် မြင်ရတယ်။ ကျွန်းကိုကျော်ရင် သဲချောင်းရွာဆိုတဲ့ သဒ္ဓါတို့ရွာကိုရောက်တယ်။ ရွာကလူတွေတောင် ဖြတ်သွားဖြတ်လာပဲ ကျွန်းကိုသိပ်မတက်ဖူးကြဘူး။ အရင်ကဆို ဂူထဲမှာ ပင်လယ်ဖျံတွေတောင်ရှိတယ်လို့ ပြောကြတယ်။ ခုတော့မတွေ့ခဲ့ဘူး
ပြီးတော့ ကျွန်းက နတ်ကြီးတယ်တဲ့​။ စကားအပြောအဆိုမှားလို့မရဘူးတဲ့။ ပြုတ်ကျပြီး လက်ကျိုး ခြေကျိုးဖြစ်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်တဲ့။ ကျွန်းရဲ့အငူစွန်းလေးရေတက်ရင်ပျောက်သွားပြီးတော့ ရေကျတဲ့အချိန်ဆို ကျောက်ဆောင်ကြီးတွေ ပေါ်လာတာ ကျွန်းရဲ့အလှတစ်မျိုးပေါ့။ တခါတလေမျက်လှည့်ပြနေသလိုပဲ ကျွန်းအငူကပျောက်သွားလိုက် ပြန်ပေါ်လာလိုက်နဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ! ပီးတော့ ကျွန်းကနေ ဆက်သွားရင် တန်းခါးရိုးရွာနဲ့ ကျွန်းအဆုံးထိ လမ်းလျှောက်သွားလို့ရတယ်တဲ့။ ရေကျချိန်မှ ကျွန်းကပိုလှတယ်။ ရေတက်နေရင် စက်လှေအကြီးတွေ ကျွန်းဘေးအရမ်းကပ်လို့မရဘူး။ ကျောက်ဆောင်တွေပေါလို့။ သူရဲ့ထူးခြားချက်က ပင်လယ်ကိုထိုးထွက်နေတဲ့ အငူပဲ။ အဲ့နေရာကအသက်
သူငယ်ချင်းတွေသာပါမယ်ဆို ကျွန်းအဆုံးထိပတ်ပလိုက်ချင်တာ။ အဲ့မှာ လခြမ်းကွေ့ပုံစံ ကျွန်းအဝိုက်ကြီးရှိသေးတယ်။ နေလည်းမပူဘူး ကျွန်းအရိပ်ကြောင့်။ တခါတလေ ငါးဖမ်းစက်လှေတွေ ကမ်းနားကပ်ထားလေ့ရှိတယ်။ ကျွန်းကနေ ကျောက်ဖြူမြို့ကိုလည်းလှမ်းမြင်ရသလို သဒ္ဓါဟိုတခါက Vlogတင်ထားတဲ့ မီးပြတိုက်ကျွန်းနဲ့ဆိုလည်း နီးနီးလေးပဲ​။ ကျောက်ဖြူကနေလာမယ်ဆို ဆိပ်ကမ်းကနေပြီး စက်လှေငှားလာလို့ရပါတယ်။ နီးနီးလေးပါ​။ အဲ့လိုသွားတဲ့လူမရှိသေးတော့ စက်လှေခဘယ်လောက်ကြလဲဆိုတာ သဒ္ဓါလည်း တိတိကျကျမသိပါဘူး။ သဒ္ဓါကအိမ်ကစက်လှေနဲ့ သွားတာမလို့ပါ။ စက်လှေသမားတိုင်းတော့သိပါတယ်။ ဆိတ်ကျွန်းလောက်လည်းမဝေးပါဘူး မိနစ် ၂၀ ၊၂၅ မိနစ်လောက်ပဲသွားရပါတယ်။ ရေတက် ရေကျချိန်ကိုမေးပြီး လာရင်အကောင်းဆုံးပါ​။ ရေတက်နေရင် ကျောက်ဆောင်တွေသိပ်မပေါ်လို့ပါ။ ကျောက်ဖြူရောက်ရင်တော့ ဒီလိုကျွန်းတွေကို Explore လုပ်သင့်တယ်လို့ထင်တယ်။ လုံးဝကို Untouched Island တွေမလို့။ သဒ္ဓါဘာလို့ ဒီလိုကျွန်းတွေကို Explore လုပ်နေရတာလဲလို့မေးရင် ကိုယ့်ဇာတိမြေရဲ့ သဘာဝအလှအပတွေကို တစ်နိုင်ငံလုံးကသိအောင် ဖော်ထုတ်ပေးချင်လို့ပါ။
တိမ်မြှုပ်ပျောက်ကွယ်နေတဲ့ အဖိုးတန်နေရာကောင်းတွေ အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ ပြီးတော့ Tourism ဆိုတဲ့ ခရီးသွားနယ်ပယ်ကနေပြီး ပြည်သူတွေကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ဝင်ငွေရစေချင်ပါတယ်။ ရခိုင်လို့ပြောလိုက်ရင် လူတိုင်းက ကြောက်နေတာမျိုးကို တကယ်မလိုပါဘူး​။ တိုင်းပြည်လည်း ဒီထက်အေးချမ်းပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်က အလှတရားတွေကို လူတိုင်း လေ့လာ အပန်းဖြေနိုင်အောင်လုပ်ပေးချင်ပါတယ်။ အခု သဒ္ဓါဖော်ပြထားတဲ့ နေရာအကုန်လုံးက အေးအေးချမ်းချမ်းသွားလို့ရတာမို့ Covid ကြီးပြီးရင် ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့အလှအပတွေကို ခံစားဖို့ လာခဲ့ကြပါလို့ ဒီနေရာကနေ ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်လည်း ရခိုင်ပြည်ရဲ့ အထင်ကရနေရာတွေကို တင်ပေးဖို့ရှိတာမို့ Pageမှာ အမြဲစောင့်ကြည့် အားပေးကြပါဦးနော်